Semalt: Ahoana ny fomba hanakanana Pop-Ups miaraka amin'ny Blockers Ad
Ny dokam-barotra Pop-up dia efa hatramin'ny fiandohan'ny World Wide Web. Mitantara i Lisa Mitchell, manam-pahaizana Semalt , fa toy ny dokambarotra an-tserasera ihany koa, dia fomba tsotra ahafahan'ny mpizahatena manamboatra ny vokatra sy ny serivisy amin'ny aterineto. Na dia manampy sy mahasoa aza ny sasany amin'ireo pop-ups, dia mety hanimba ny tranokalanao ny ankamaroan'ny pop-ups.
Inona ny dokambarotra pop-up?
Voalohany indrindra, andeha hanazava hoe inona ny pop-up. Pop-ups dia ny tabilao, ny varavarankely, ary ireo boaty izay misokatra ho azy ireo ary mijanona ao mandra-pahatonga anay hanao zavatra mba hikatonany. Ny fiovan'ny toetr'andro ny pop-ups dia pop-up, ny varavarankely izay misokatra ao ambadiky ny tranonkala web. Marina fa tsy ny pop-ups rehetra no mitovy amin'ny endriny sy ny toetra. Ny sasany amin'izy ireo dia mahasoa ary tsy mandrisika ny miditra amin'ny anaran'ny mpampiasa sy ny tenimiafina, raha ny hafa kosa dia manelingelina sy mampidi-doza rehefa mandefa fangatahana amin'ny mpampiasa izy ireo ary mamporisika azy ireo hanoratra ny gazetiboky. Ohatra iray momba ny pop up malware ny malwaretips.com.
Ahoana ny fanakanana ny dokambarotry Pop-Up
Misy fomba telo hanakanana pop-up ao anaty lalan-tsarimihetsika: ny safidinao, ny fanakanana adiresy toy ny AdBlock ary ny fanakanana pop-up blockers.
1..Pop-Up Blocking ao amin'ny tranonkalanao
Ireo mpampiasa tranonkala dia manana ny blocs pop-up. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, ary ireo browsette rehetra dia samy manana ny adin-tsarimihetsika pop-up, fa tsy ny rehetra no mamela antsika hanidy ny fanesorana ny pop-ups na tranokala na tsia.
2. Ireo Blockers Ad pop-up-nao: 14)
Araka ny hevitr'izy io, ny mpiblaogy pop-up dia hifantoka amin'ny fanakanana ny dokam-barotra rehetra, na mahasoa ho anao izany na tsia. Tsy sahala amin'ireo mpangalatra adala, ny mpibilaogy pop-up dia tsy manakana karazana dokambarotra hafa. Raha te hahalala misimisy kokoa momba azy ireo ianao, dia mila miditra "blockers pop-ups ho an'i Chrome", "pop-up blocker pop-ups ho an'ny Firefox", ary "best blockers pop-up safari safari" search engine. Ny Microsoft Edge dia tsy manana fomba manokana hanakanana ny doka pop-up.
Ireo dokam-barotra pop-up dia angatahana amin'ny fomba mitovy amin'ny dokam-barotra ao anaty pejy; Afaka manakana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny fanakanana dokam-barotra. Raha toa ka tsy nampiasa fanakanana adiresy ianao taloha, dia manoro hevitra anao hanandrana AdBlock. Io no iray amin'ireo mpamaha bolongana tsara indrindra sy be mpampiasa indrindra amin'ny aterineto. Na dia izany aza dia tsy manakana ny dokam-pandao rehetra raha tsy misy azy. Izany dia noho ny fahasamihafana eo amin'ny dokam-barotry ny antoko fahatelo sy ny dokambarotra voalohany. Ohatra, EasyList, fitsipika sy fitsipika mifehy ny sivana ampiasain'ny dokambarotra adala rehetra, matetika dia tsy miraharaha ireo dokambarotra pop-up voalohany. Raha te-hanara-maso azy ireo ianao dia tokony hanamarina ny lisitry ny faniriana faniriana Fanboy. AdBlock dia hanakana mora ny fangatahana manokatra ny pop-ups. Indraindray ny solosaina finday dia afaka manampy amin'ny fampitsaharana ireo pop-ups amin'ny fanivanana ireo angona tsy fantatra. Karazana pop-ups izay mety ho voasakana amin'ny AdBlock dia dokam-barotra ratsy. Raha mifandray amin'ireo tranonkala maimaimpoana maimaim-poana sy famandrihana maimaimpoana maimaim-poana ny adware, ireo tranonkala mahazatra kosa dia lasibatra ihany koa.
Marina fa tsy ny dokambarotra pop-up rehetra dia mahasosotra, mampidi-doza na mampiahiahy, ka afaka manakana ny ankamaroan'ny dokam-barotra tsy ampiasaina amin'ireo fomba voalaza etsy ambony ianao Source .